पूर्वनिर्धारित गेटवे आईपी 192.168.0.1 प्रशासक कन्सोलमा लगइन गर्न आईपी पूर्वनिर्धारित ठेगानाको रूपमा डी-लिंक राउटर जस्ता मोडेमहरू सहित राउटरहरू द्वारा लागू गरिएको हो। उन्नत र आधारभूत 192.168.0.1 कन्फिगर गर्न सेटि settingsहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
192.168.0.1 प्रशासन लगईन
आईपी ​​192.168.0.1 मा लगईन गर्नका लागि चरणहरू
यदि मोडेम / इन्टर्नेट राउटरका लागि आईपी ठेगाना पूर्वनिर्धारित हुन्छ भने १ 192.168.0.1 २.१.192.168.0.1.०.१। त्यस अवस्थामा, तपाईले निस्सन्देह यसलाई कन्फिगरेसन कन्सोलमा लगइन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको मोडेम / राउटरले इन्टरनेट सेटिंग्स नियन्त्रण गरेर। केवल १ XNUMX २.१XNUMX.०.१ मा लगईन गर्नका लागि, तलका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्
निश्चित गर्नुहोस् कि उपकरण ईथरनेट तार माथि वा तार बिना प्रणालीमा जोडिएको छ।
अब वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् जुन तपाईं इन्टरनेट पहुँच गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ।
ठेगाना बारमा टाइप गर्नुहोस् http://192.168.0.1 or 192.168.0.1.
तपाईंको राउटरको लगइन पृष्ठ साथै मोडेम स्क्रिनमा सतह हुनेछ।
तपाईंको राउटरको कन्फिगरेसन पृष्ठको लागि पासवर्डको साथै प्रयोगकर्तानाम जस्ता पूर्वनिर्धारित लगइन आईडीहरू सबमिट गर्नुहोस्।
मिनेट तपाईले लगईन रेकर्ड बुझाउनु भयो, तपाईले कन्फिगरेसन वेबपृष्ठमा लगइन गर्नुपर्नेछ यसका साथै चाहिएको परिमार्जन कसरी गर्ने भनेर जान्नु हुनेछ।
किवर्डहरूको शीर्षमा लगइन विवरणमा रिपोर्ट संरक्षण गर्न असमर्थ हुनुहोस्?
निर्देशन पुस्तिका बुक गर्दै
यदि तपाईं २ 192.168.0.1 २.१XNUMX.०.१ को लागि लगइन प्रमाणहरू सम्झन असफल हुनुभयो भने तपाईंले म्यानुअल जाँच गर्नु पर्छ वा राउटरको बक्समा। थप रूपमा, तपाईले प्रयोगकर्तानामहरूका लागि पूर्वनिर्धारित राउटर सूची साथै राउटरहरूको लागि पासकी जाँच गर्नुपर्नेछ।
राउटर रिसेट गर्नुहोस्
यदि तपाइँले राउटरको पूर्वनिर्धारित लगइन विवरणहरू परिमार्जन गर्नु भएको छ र त्यसलाई त्यसलाई मोल तिरेर बेवास्ता गर्नुभएको छ भने पुन: प्राप्तिको लागि माथि पुग्ने मार्ग भनेको पूर्वनिर्धारित सेटिंग्सको साथ राउटर रिसेट हो जुन वास्तवमै सबै संशोधनहरूलाई पूर्वनिर्धारितमा फर्काउँदछ। राउटर रिसेटका लागि:
टुथपिक वा पिन जस्तो पोइन्ट वस्तु समाउनुहोस् र पछाडि राउटरमा रिसेट स्विच फेला पार्न प्रयास गर्नुहोस्।
यो क्षण तपाईंले सानो गोपनीय स्विच देख्नुभयो। थिच्नुहोस् र एक पोइन्ट वस्तु द्वारा करीव १ for-२० सेकेन्डको लागि स्विच होल्ड गर्नुहोस्।
यसले सबै परिवर्तनहरूलाई पुन: पूर्वनिर्धारित सेटिंग्समा पुन: भण्डारण गर्दछ जुन तपाईको प्रयोगकर्तानाम / पासवर्डको साथमा परिवर्तन गरिएको छ। त्यसैले अब तपाईं पूर्वनिर्धारित लगइन प्राधिकरणको साथ लगइन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
व्यक्तिगत आईपीहरूको कूल १ 17.9..XNUMX मिलियन विविध ठेगानाहरू छन्, सबै निजी नेटवर्कमा प्रयोगको लागि अलग राखिएको छ। त्यसकारण, राउटरको निजी आईपी अपवाद हुन आवश्यक छैन।
नेटवर्कका सबै उपकरणहरूमा राउटरले आरक्षित आईपी ठेगाना आवंटित गर्दछ, चाहे यो व्यापार-स्तर स्थापना हो वा सानो घरेलु नेटवर्क। प्रणालीमा सबै उपकरणहरू यस व्यक्तिगत आईपीको साथ प्रणालीमा वैकल्पिक ग्याजेटमा जडान हुन सक्छ।
यद्यपि निजी आईपी ठेगानाले नेट पहुँच गर्न सक्दैन। व्यक्तिगत आईपी ठेगानाहरू ईन्टरनेट सेवा प्रदायकको माध्यमबाट सम्मिलित हुनुपर्दछ, उदाहरणका लागि, कमकास्ट, स्पेक्ट्रम वा AT&T। त्यसैले अब, सबै उपकरणहरू जो प्रत्यक्ष इन्टरनेटमा सामेल छन्, सुरूमा प्रणालीमा जडान गर्दै, जुन इन्टरनेटमा जोडिएको छ, पछि ठूलो इन्टरनेटमा जडान हुँदै।